साम्राज्ञीले फिल्म छाड्दा फाइदा कसलाई ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsसाम्राज्ञीले फिल्म छाड्दा फाइदा कसलाई ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – एउटै समयमा जति फिल्मको अफर आएपनि काम गर्ने हिरोइन पनि नेपालमा छन् । बिहान र बेलुकाको सेड्यूल मिलाएरै भएपनि उनीहरु काम गरिदिन्छन् । कोही कलाकारलाई त आफूले कुन सिनेमामा काम गरिरहेको छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । तर, अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको नजरमा भने काम गराइको स्टाइल यस्तो हुनु हुँदैन । उनी आफूले बनाएको क्रेजलाई गुमाउन चाहन्नन् । यसैले पनि उनी एउटा सिनेमामा काम गर्दा अर्कोमा काम नगर्ने सोचमा देखिन्छिन् ।
साम्राज्ञीले सार्वजनिक रुपमा नै यो कुरा स्विकार पनि गरेकी छिन् । तर, साम्राज्ञीले सिनेमा छाड्दा त्यसको फाइदा अन्य अभिनेत्रीलाई भैरहेको छ ।
साम्राज्ञीले छाडेका सिनेमा हलमा हिट पनि भएका छन् । साम्राज्ञीले सिनेमा छक्का पन्जा २ बाट आएको अफरलाई अस्विकार गरेकी हुन् । यो सिनेमामा साम्राज्ञी र प्रदिप खड्कालाई खेलाउने सोचसहित यसका निर्माताले अफर गरेका थिए । तर, साम्राज्ञीले काम गरिनन् । साम्राज्ञीले काम नगर्दा सिनेमामा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का भित्रिइन् ।
यो सिनेमा ब्लकबस्टर भयो, फाइदा स्वस्तिमालाई भयो । उनी नेपाली फिल्मकी अहिलेकी चल्तीकी अभिनेत्री बनिन् ।
साम्राज्ञीलाई निर्देशक अशोक शर्माले फिल्म जय भोलेमा काम गराउन खोजेका थिए । तर, साम्राज्ञीले एक पटक कथा सुनिन् र काम गरिनन् । उनले सो समयमा आफू अर्को सिनेमाको काममा व्यस्त भएकाले नगरेको बताएकी छिन् । जय भोले अहिले हलमा लागिरहेको छ ।
अहिले यो सिनेमाले कारोबार पनि राम्रो गर्दैछ । साम्राज्ञीले काम नगर्दा सिनेमामा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का भित्रिइन् । स्वस्तिमालाई यो फिल्मबाट पनि फाइदा भयो ।
सिनेमा छक्का पन्जा ३ को कथा त दिपकराज गिरीले साम्राज्ञीलाई नै हेरेर लेखेका थिए । तर, साम्राज्ञीले यसपटक पनि काम गर्न रुची नदेखाउँदा यसमा अभिनेत्री दीपिका प्रसाई भित्रिइन् । साम्राज्ञीले इन्टु मिन्टु लण्डनमा र यो सिनेमाको छायांकन एकसाथ हुने भएकाले आफूले काम नगरेको बताएकी छिन् । तर, छक्का पन्जा २ दिपिकाका लागि लक्की बनेको छ । यो सिनेमा नेपालमा सर्वाधिक कमाई गर्ने सिनेमा समेत बनिसकेको छ । सायद, यो सिनेमाको व्यापार हेरेर साम्राज्ञी पछुताउँदै होलिन् ।
सिनेमा लभ स्टेशन पनि साम्राज्ञीले गरिनन् । अभिनेत्री जसिता गुरुङ र साम्राज्ञीलाई खेलाउनका लागि निर्माता गोविन्द शाहीले धेरै नै प्रयास गरे । तर, साम्राज्ञीले काम गरिनन् । अहिले यो सिनेमाको छायांकन अन्तिम चरणमा छ । साम्राज्ञीले यो सिनेमा छाडेर गल्ती गरिन् या के गरिन्, त्यो सिनेमा रिलिजपछि थाहा हुनेछ ।
साम्राज्ञीले यो बाहेक अरु थुप्रै सिनेमाको प्रस्ताव अस्विकार गरेकी छिन् । तर, कहिलेकाही ब्लकबस्टर भएका सिनेमा छाड्दा उनलाई घाटा लागेको पनि छ भने अर्की अभिनेत्री उदाउने मौका पनि पाइरहेकी छिन् ।
साम्राज्ञीले काम गरेका ५ मध्ये २ सिनेमा हिट, एक औषत र २ असफल भएका छन् ।
साम्राज्ञीलाई आफ्नो भूमिका फेर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनले सिनेमा छनोट गर्दा अब अझै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।